musha NYAYA DZEEEOPEAN Mesut Ozil Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'The German Zidane'. Isu Mesut Ozil Childhood Nhoroondo pamwe neS Untold Biography Facts inokupa zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezveMesut Ozil anobatsira zvinyorwa uye kutamba kuita zvigone asi vashomanana vanofunga hupenyu hwake kunze kwechimiro chinonyanya kufadza. Iye zvino kunze kwekuwedzerwa kwesei, rega kutanga.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Mesut Özil akaberekwa musi waOctober 15, 1988, muGelsenkirchen, Germany ku Mustafa Özil (baba) uye Gulizar Özil (amai). Akazvarwa mwana wekupedzisira pakati pemwana mana. Chinonyanya kukosha, akaberekwa achiita masismusi weTurkey aibva. Muchidimbu, iye muSulumani wechiGerman Turk ane vabereki vanobva kune dzimwe nyika. Vabereki vake vaMesut vakapinda munyika nemakungwa kubva kuTurkey kuenda kuGermany kuti vawane hupenyu huri nani muGermany yaRuhr inoshandiswa mumabhizimisi enyika.
Mesut Ozil akatanga hupenyu hwake semucheche kubva kumusha usina urombo. Akaberekwa munguva yeGermany yekushanda kwemaindasitiri uko kushaya kwehuwandu hwevanhu vanoenda kune imwe nyika kwaive kupfuura 70%. Vabereki vake saka vakarwa nebasa rimwe rekubhadhara rakaderera kune rimwe kuitira kuti mhuri dzifambe. Nharaunda yake yaifamba kune imwe nyika yakaratidza kusagadzikana kwevanhu uye huwandu hwakasiyirwa dzimba dzaive chiratidzo cheurombo.
Pasinei nematambudziko aya, Mesut akanga akatsunga kubudirira. Chinhu chose chaakaisa ruoko rwake akafamba zvakanaka ... Kutanga kubva kuvadzidzi vake kuenda kunotsvaka kwake kutanga kutamba bhora. Nechechokwadi, Mesut akashandisa bhora senzira yekupukunyuka kubva paurombo.
Rudo rwake rwebhora rakatanga apo akatanga kutamba naro padivi raaifarira pedyo neimba yake. Mesut Ozil pazera remakore akangodaro akashungurudzika nekukandira bhora. Paakaedzwa, aizotora kumba ndokurara akazviisa pamubhedha wake. Akashandisawo nguva yakawanda achiona mukoma wake mukuru achimuitira zvinhu.
Achikura, akatora zvidzidzo zvakawanda zvebhora kubva kumukuru wake Mutlu uyo ​​aida chete bhora nekuda kwekunakidza kuridza. Mutlu haatendi kuti mumwe munhu wechipfuwo chake anokwanisa kuitisa mubhodhi. Zvichida, Mesut Ozil's immigration neighborhood (a scruffy suburb of around 16,000 inhabitants) haana kumboonekwa sechinhu chinokonzera vatanha vane tarenda.
Kutsunga kwake kubudirira kwakaunza nyaya yekubudirira yakafuridzira rudzi rweGermany. Anotaridzika seyekutanga mutambi wenyika kubva kune imwe nyika yakabva kune imwe nyika kuti aite nyika yose.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: The Start to Soccer
Mesut Ozil akasarudza kupa bhora pfuti pakarepo paakaona yaive nzira yakarurama yekubuda muurombo. Akatanga kuburikidza nekupinda muchikwata chake chekuchikoro akazotevera nekuvandudza unyanzvi hwebhora pamwe neshamwari dziri mu "Monkey Cage," (imwe nzvimbo yakatarisana nemasvingo) ari munzvimbo yake yekugara.
Yaiva iyo 'monkey cage' kuti Ozil ruzivo rwekupfuura radar rwakatanga kusimbiswa. Izvi zvakaitika muGermany Bismarck ruwa rweGelsenkirchen. Mesut Ozil aizove ari panzvimbo 'zuva nezuva kana iri zuva, chando kana mvura', maererano nehanzvadzi yake Mutlu.
Chiitiko chakawana kubva ku "Monkey Cage football" akawedzera mikana yekuwana miedzo yakabudirira yeboka rakakura kunze kwerudzi rwekugara. Kutanga, akanyoresa chechikoro chechikoro chekutanga chechikoro.
Mesut akafambira mberi kubva paujaya hwake kusvika kune munhu mukuru uyo ​​anoreva chikwata chebhokisi yekoroji. Chikoro chake chesekondari chaiva chikuru muGermany kune vanopfuura 1,400 vadzidzi. Akanga achifarirwa zvikuru uye akanga achiri kusarudzwa kuti amire chikoro.
Joachen Herrmann, Mutevedzeri mukuru wekuchikoro chesekondari yeOzil, anorondedzera kufadza kwekakomana nemukomana 'a bit bit autistic', achiwedzera kuti: 'Ndaigara ndichifunga kuti akatora bhora kunorara.'
Kubva pawindo rake rekirasi yekudzidzira, Ozil aigona kuona Veltins-Arena, nhandare yeimba yeSchalke. Mukomana uyu anorota aiva nechikonzero chose chokurega pfungwa dzake dzichidonha. Sezvo tarenda yake yepakutanga, chikoro chinoshamwaridzana zvikuru nechekuBuddesliga.
Mwana wechikoro Ozil aifungidzirwa nebhola. Pasinei naizvozvo, aive akachenjerawo kuchikoro. Manuel Neuer, muchengeti weBayern Munich aivewo muchikoro. Akange ari makore mashomanana pamusoro peOzil, apo Julian Draxler akanga ari pasi. Benedikt Howedes naJoel Matip vadzidzawo kuchikoro. Chikoro chakanga chiri mberi maererano nemashoko ebhora. Vaiva nezvakawanda zvokurovedza mabasa, zvirongwa zvitatu mangwanani-ngwanani, katatu manheru uye kanomwe panguva yekupera kwevhiki.
Ozil aizivikanwa semudzidzi akachengetwa asi mukudzidziswa uye pamasikati mazuva ake hupenyu hwakashanduka. 'Pandakaona Mesut kwekutanga, ndaifanira kutarisa zera rake,' anodaro Krabbe, mudzidzisi wechikoro. 'akanga ari muduku zvikuru, akanyarara, akadzivisa pakarepo. Asi pamutambo wenhabvu ndiye akanga ari wekutsvaga, mutambi mukuru kwazvo. Anodurura chifuva chake kuti aite. "Akange ari iyo nyanzvi yemutambo wedu.".
Yaiva paGelsenkirchen College iyo Ozil akaziva kuti aizobudirira kuburikidza nebhola. Akarwa nehuzhinji hwehupenyu hwehupenyu hwake pakarepo paakatanga kutambira zvakawanda. Akanga achizivikanwa kuti ari mwana anonyara chaizvo kubva pamuti.
Mudzidzisi wake akambozviisa "Mesut akanga asiri mudzidzi aigona kutarisana neboka revanhu. Aigara ari anonyara. Asi kana iwe ukamuona ari panhizha iye aive mumwe munhu, nokuti ikoko akaputika. Mupe bhora, uye iye angave ari mumwe munhu. "
'Aive ane nyara asi aigona kupfura 25 mamita, akamhanyisa kwazvo uye akapinda mumakwikwi ose ebhora,' vanoti kirasi yechikoro Ralf Maraun. Akaenderera mberi ... 'Aive mumugwagwa chaiye webhola. Ndinoyeuka kamwechete takakunda mutambo 12 zvinangwa kusvika zero. Mesut akawana 10. Mumwe mudzidzisi webato akanditora parutivi ndokuti, "Nguva inotevera, ndapota tisiya mwana ari kuenda kumba". '
PaKoreji, mukomana anobva kune Bismarck akava mucheche anozivikanwa zvikuru. Izvo hazvina kutora nguva refu asati abhareswa muGermany muviri webhola kune zvikoro kwaakagamuchira ID yake. Izvi zvakamugonesa kuti atore chikamu mumakwikwi makuru.
Mesut anopa nguva yega yega yekuchengetedza hupenyu hwake. Mushure mokunge apedza kubudirira, akaita chinhu chimwe chete munhu wose achiri kumurangarira kusvikira zuva. Ndizvozvo; kugoverana mukubudirira kwake nevanodiwa.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Mhuri yaMesut Ozil yakatanga hupenyu muruwa rweBismarck, Germany. Iyi inzvimbo yeGermany inowanzogara neTurkey Migrant.
Mhuri yake yakabva kuTurkey ichienda kuGermany kuzova vashandi mugore re1967. Kwemakore, vakagara muhurombo. Yaiva Mesut uyo akashandisa bhora kuti achinje mugumo wemhuri yake. Akanga ari iye oga Mutambi weTurkey akaita kuti mhuri yake iwedzere kunoshamisa kubva paurombo kusvika pfuma isingafungidziki.
BABA: Mustafa Özil ndiye baba vaOzil. Ndiye wechipiri wechizvarwa cheTurkey akaenda kuGermany nababa vake paakanga ava nemakore 6.
Asati ashandura mabasa mushure mekunge mwanakomana wake akazviita muhodhi, aimbova mushandi wesimbi. Akatanga sevatengesi (chikafu chemhuka) munguva yehuduku hwake.
Mesut Ozil akabvumira baba vake Mustafa kuti vave mutungamiri wavo mushure mekunge akazviita mumutambo. Izvi zvakamuita kuti akanganwe nezvebasa rake rekare uye akaisa pfungwa dzake mubhizimusi rebhiza. Akaita mari inoshamisa inoshamisa kubva pamabasa emwanakomana wake.
AMAI: Mai Gulizar Özil ndivo amai vaMesut Ozil. Akabva atanga semudzimai weimba yaive nemutoro mukuru wekudzivirira vana vake. Akarondedzerwa seamai vane hanya vanobva kune dzimwe nyika vaimbova pamwe chete naye munzvimbo yavo yekugara muGermany. Mukadzi ane simba / mwanakomana musungo uripo pakati paMesut naGuzar.
SIBLINGS: Mesut Ozil ane vana vatatu; iyo ndiyo Mutlu Özil, Nese Özil uye Dugyu Özil.
Mukuru wake, Mutlu Ozil. Akambove ari mutambi wemutambo asina kutamba nebasa kuti asafambise basa kubva kune iro asi kufadza vanhu vaifarira watchin maitiro ake ekudzidzira. Akave nemukana wekusimudzira basa rake mberi asi haana kumbofunga kuti mutambi weTurkey aizoita mubhola. Nhasi, anorumbidzwa kuti Mesut Ozil anowedzera kukura. Mesut akadzidza mukana webhola kubva kwaari. Kubwinya, kupfuura, uye kutamba kuita unyanzvi zvose zvakabva kuMutlu.
Mesut Ozil ane hanzvadzi mbiri mbiri; Nese Ozil (kurudyi) uye Dugyu Ozil (Kuruboshwe). Vose vakwezva hanya nekuda kwezvavo kuMesut Özil. Nese (kuruboshwe) kunyanya yakatsanangurwa se clone yaMesut. Iwe, hanzvadzi yake yakakurumbira uye yakaderera Dugyu iri pedyo zvikuru. Mukoma wavo anomuka pakugadzikana akapa ruzhinji rwekubhadhara mari kune hanzvadzi dzake dzakanaka. Nhasi, mararamiro avo kwenguva refu akarota.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Reationhip upenyu
Chokutanga, Mesut Ozil hupenyu hwehupenyu hwakave hwakaoma. Anozviwana achikwezva zvikuru kune vakadzi vasiri veMuslim avo vasingadi kutendeukira kuchitendero chake, nokudaro zvinotungamirira kukanganisa.
Kutanga, Mesut Ozil akambotaura nezveAna Maria, uyo ari muGermany muenzaniso uye uyo akamboroorwa nemutambo webhola rekuFinnish, Pekka Lagerblom.
Apedza kuputsa naOzil, iye zvino ava kufambidzana nomuimbi weGermany anonzi Bushido.
Mesut zvakare ainzi Aida Yespica, aive anonyanyisa kunaka peji queen uyo akazova Miss Venezuela mu2002.
Ozil akatanga kufambidzana Mandy Capristo, muimbi nebasa, kubva ku2013 asi ukama hwavo hwakasvika pakuguma muna 2014 mushure mekunge zvataurwa kuti akanga achiona mumwe mukadzi.
Akazouya zvakare kuukama hwake neyekare-musikana wake uye mutumbi anozivikanwa zvikuru Mandy Capristo. Kubatana kwakatanga munaNovember, 2015. Mushure mekuparadzanisa kwavo vakaziva kuti ivo vakafanirwa kune mumwe nemumwe zvakare vakadzoka pamwe chete.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Kutya naBaba
Mustafa (baba vaOzil) anozivikanwa nokuda kwesimba rake. Akazova mumiriri wemwanakomana wake muna July 2011. Mustafa munguva pfupi yapfuura akarega basa racho mushure mekuita chisarudzo naOzil kuti asarudze mukoma wake Mutlu pane. Izvi zvakaona kutanga kwemhirizhonga pakati pebaba nemwanakomana. Mustafa anoti musikana waMesut, Mandy Capristo, ndiye oga ane mhosva yekutonga kwemwanakomana wake kumurega semushandi wake.
Izvi zvakatungamirira kune izvo vakawanda vakaona sekutyisa. Baba vake, Mustafa vakapfuurira kumusunga mwanakomana wavo mushure mekumuputira.
Maererano neshumo; 'Mustafa Ozil haasi munhu ari nyore kubata nawo. Akanga akanyanya kufunga nezveMesut uye aiziva kuti akanga ane tarenda huru. Anoenda kune imwe neimwe yekudzidzira kwake, mitezo yose. Yakava pakati pehupenyu hwake mushure mekuderedza mhepo yake shoma yesimbi inobata basa kutevera basa remwanakomana wake. '
Baba vake vakagumburwa nekusiyiwa kunze vakatora kambani yeMesut Ozil yekukwirira. Akakumbira $ 495,000 mupiro mukurasikirwa kwake. Mesut Ozil haana kutaura nababa vake kubva pane zvaakaita. Baba uye mwanakomana hukama hunonzi hwakambove hwakasimba hwakaparadzwa nehondo yepamutemo.
Paakacherechedza zvaaida, gweta raMesut Ozil rakakumbira kudzoka kwe £ 800,000 baba vakanga vatora kubva kumwanakomana wavo kuti varege kuita chinhu. Nyaya yacho yakazogadziriswa kunze kwedare. Iyi nyaya yakawana vabereki vaMesut Ozil kuti vagovane naamai vanotevera kutungamirirwa kwomwanakomana.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: A Serious Muslim Asi ...
Mesut Ozil is a Muslim. Kunyanya, iye muMuslim anozvipira, uyo anoverenga Korani tsvene pamberi pemiti yose yaanofanira kutamba nayo. Kutaura neBerlin-based daily "Der Tagesspiegel", Mesut akati, "Ndinogara ndichitsvaga kubva kuKorani ndisati ndabuda (panzvimbo yacho). Izvi zvinonyatsondibatsira kuti ndirambe ndakatarira. Ndinonamata uye boka rangu-vakaroorana vanoziva kuti havagone kutaura neni paminyengetero yangu. "
Pasinei nokuva musikrasi, Mesut Ozil anoona zvakaoma kutsanya panguva yezhizha. Izvi zvinokonzerwa nebasa rake sebhola.
Uyezve anonyora ndima kubva kuQurani panguva yeGerman nyika nziyo. Ichi ndechokuti haakwanisi kuimba rwiyo rwenyika.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Yakaridza Chess semwana
Mesut Ozil akadzidza kutamba chesi paanenge achikura mumunharaunda yevagari vemuGelsenkirchen, Germany. Kungofanana nebhola, iye akafananidza Chess achiri mwana.
Akanga ari nhengo yeboka rake rekuchikoro uye chess club. Mesut aifarirawo masvomhu kuchikoro. Rudo rwake che Chess neMathematics rwakarongedza nzira yekufunga kwake uye yekuita kuita zvigadziro mubasa rekutamba.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: kusafa
Mazhinji mavhii akabvunza mubvunzo; Is Mesut Özil IMMORTAL ?. Mazana mafamu akawana kugadzikana pamusoro pemunhu weArsenal akafanana nekanguva yeF1 legend, Enzo Ferrari.
Kunyange Vanyori vanofunga kuti Mesut Özil ndiye kuberekwazve kweEnzo Ferrari. MuItaly motokari yekufambisa mutyairi uye muzvinabhizimisi akafa musi wa 14 August, 1988 - kupa nguva yakakwana yekuitazve kwekuberekwazve kwemazuva asati azvarwa musi wa 15 October, 1988. Iyi nheyo yave yakatsigirwa mune dzidziso dzeBuddhist neTaoist, iyo inoti mweya womunhu unosiya mukomana uye anozvarwazve shure kwekufa. Ichi ndicho chikonzero nei vazhinji veNew Age vanofunga kuti Enzo Ferrari, muvambi weFerrari, akaberekwazve saMesut Ozil.
Kuzvarwa patsva uye nguva inofamba maonero pamusoro pe celebs hazvisi zvitsva.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Haasi Munhu
Kubatsira kwake hakuna miganhu. Ichi ndicho chikonzero vazhinji vanotenda kuti haasi munhu. Mesut Ozil anoona izvo vanhu vanoona zvakaoma kuona. Mufananidzo uri pasi apa unoratidza.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: mutsa
Mesut anozivikanwawo nokuda kwehupenyu hwake hwepfungwa dzakapa zvikwereti zvakawanda kune masangano akawanda ezvakanaka. Akapa mari yose yeHNUMX World Cup mari (yeAIDS 2014, 5, 00) yekurapwa kwevana vane 000 kuBrazil.
Kuvhiya kwavo uye kurapwa kwakabuda kubudirira. Akaita izvi sechiratidzo chekutenda kugamuchira kwakanaka kwevanhu veBrazil. Ichi chaive chikamu chejekiti yake yeBigShoe. Basa racho rakaguma nokupa shangu sechipo kune mumwe wevana vaibatwa neBrazil uyo ari kuitika kuva anouya.
Muna May we2016, Mesut akashanyirawo musasa wevapoteri weZaatari muJorodhani uye akasaina autographs kune vateveri vake iyo yakagadzirisa pamusoro pevapoteri veChina vainge vapinda muSyria.
Aitarisira vana vakadzingwa kubva pamusana pehondo yeSyria yehondo. Özil akatarisa musasa pamwe chete nekutamba nevana, achinyora autographs uye achipa mabhora ebholabhokisi.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts:Nezve Meso Ake
Kana iwe ukatarisa mufananidzo weMesut Özil maziso, unogona kufanidza a mufananidzo kune mumwe munhu anotambura kubva kuGerves Disease (yaka thyroid yeziso). Asi haasi kutambura nemamiriro ezvinhu akadaro.
Iyi nhatu nhatu dzinotiita kuti tifunge Özil haisi makuva ane chirwere ichi:
Chokutanga, maziso ake haaiti chero chiratidzo we redness kana zvimwe zviratidzoinowanzoenderana nemamiriro ezvinhu.
Chechipiri, chirwere chemakuva chiri mamiriro apo izvo zvinoitika mumuviri zvinowanzouya uye zvichienda, kana kupera muchisimba. Maziso eOzil akagara akanaka zvakasimba.
Pakupedzisira, mamiriro akaita seGeves chirwere angave divi zvinokonzerwa kufanana nokuona kusina kunaka, aches nemarwadzo, kana kurasikirwa kwemaziso. Izvi zvingaita kuti ave mutambi wenyanzvi ari kutamba panzvimbo yakakwirira chaizvo zvisingabviri.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts:Mabhuku Ake
Bhuku rakatsaurirwa kwaari. Iko kunonzi "Mesut Özil Superstar". Izvi zvakaitwa neavo vaida chaizvo avo vakanga vakamanikidza zita rake kuti rirambe risingazivikanwi.
Mesut akada uye akabvumirana naye kuti anyore mumwe wavo ane slug 'Gunning for Greatness'.
Mesut Ozil Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Accolades uye Achievement List
(1) NeArsenal FC akakunda FA CUP katatu (2013-14, 2014-15, 2016-17) uye FA Community Shield mu 2014,2015 uye 2017.
(2) Ne Real Madrid, akakunda La Liga (2011-12), Copa del Rey (2010-11) uye Supercopa de España mu2012.
(3) Aine Werder Bremen, akanga atora DFB-Pokal (2008-09).
(4) NeGermany, akakunda FIFA World Cup (2014) uye UEFA European Under-21 Championship (2009).
MIMWE MIBVIRO INONYANYA
2010 FIFA World Cup Kubatsira
2011, 2012, 2013 uye 2015 Mutambi wechiGerman weMwaka
2010 FIFA World Cup Murume weMutambo (vs Ghana)
2010-2011 UEFA Champions League Top Inobatsira Jose Mourinho uye Real Madrid
2011-2012 La Liga Top Inobatsira Jose Mourinho uye Real Madrid
2015-2016 Premier League Top Inobatsira Arsene Wenger uye Asernal
2015-2016 Player of the Season by zvombo
2012 UEFA Best Player muEurope Mubayiro (10th nzvimbo)
Ozil Mesut June 28, 2018 Pa 1: 39 pm
Honda Keisuke weJapan anoita kunge ari kuita zvakanaka akati mutambi wenyanzvi wepasi pose paanenge achitambura nechirwere cheGrive.
Asu Gumiguru 25, 2018 Pa 5: 24 pm
iwe my favirite soccer player
Catherine Scoon Zvita 29, 2018 Pa 11: 35 pm
Iwe unonzwika seti fan rinopenga. Kunze kwekuti, ari kufambidzana naAmine Gulse ikozvino asi muchokwadi ndiye MHBby yangu.
Keylor Navas Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Shkodran Mustafi Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Mario Gotze Utano Nhau Plus Untold Biography Facts